Keke "risina zai" - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Sponge cake "pasina zai"
Snack46 maminitsi6 vanhu
Sevazhinji venyu munotoziva, ini ndine chikoro chekurera vana uye mazuva ese vana vazhinji vanopa imwe mhando ye chisimbwa kana kusashivirira. Ini ndinoda kuvaita bundu nguva nenguva kumapati kana mazuva ekuberekwa. Iyi kamukira ndakanyatsopihwa naamai, kana ndikambove nemwana ane zai allergy uye ndaida kuigadzira kuti vanhu vese vaidye.
Ndakanga ndisati ndambozvigadzirira kusvikira María R., shamwari kubva papeji reFacebook "Thermomix Recipes" akandibvunza kana ndaive nazvo chipanji keke risina zai kuunza zuva rekuzvarwa kwemwana wake kunzvimbo inochengeterwa vana, kuti paive nemwana aisashivirira mapuroteni emazai. Ndakabva ndarangarira recipe iyi ndikarumwa nekeke iri kuti raizobuda sei. Ndakazviita masikati iwayo uye takazvida!
Yakagadzirwa ne chinwiwa cheranjisi ndokusara yakanyanya muto. Iyo ine zvakare inokatyamadza ruvara.
Ndinovimba kuti nekuda kweichi chidimbu vana vane zai kukanganiswa kana kusashivirira Nakidzwa nekeke rinonaka rakagadzirwa.
1 Sponge keke "isina zai"
Sponge keke "isina zai"
Keke rine muto rechipanji rezai risingashiviriri.
Recipe mhando: snack
Kubika nguva: 1M
Nguva yakazara: 46M
35 g yemafuta ezuva
250 g jisi reranjisi
150 g yeupfu
1 sachet yekubheka poda (ona recipe)
Isu tinopisa huni kusvika ku180º nekupisa kumusoro uye pasi.
Isu tinozora chando nemafuta mashoma kana bota.
Isu tinoisa zvese zvinoshandiswa mugirazi uye chirongwa Masekonzi mashanu, kumhanya 10.
Isu tinodurura musanganiswa muforoma yatakange tagadzirira uye isu tinozvizivisa pakati nepakati pakukora kwechoto.
Tinobheka kwemaminetsi makumi matatu nemashanu kana makumi mashanu nemashanu kana kusvika pakabayiwa netsvimbo inobuda yakachena.
Mamwe mashoko - Orange muto / Chikamu «mabikirwo asina mazai»
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Nyore, Lactose isingashiviriri, Zai risingashiviriri, Asingasviki 1 awa, Mapepa evana, Keke
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Nyore » Sponge cake "pasina zai"
Martha C. akadaro
Mhoroi vasikana !!! Chekutanga pane zvese ndatenda kune yega yega mabikirwo aunoisa kune ino blog, iwo anonaka !!! Ini ndaida kukubvunza iwe, saizi yeforoma kugadzira iri keke rine pendi, uye saka ini ndanga ndanyanya kana kushoma nehurefu hwakafanana newako. Ndokutenda zvikuru
Pindura kuna Marta C
Marta idiki plumcake, kana iwe uchida bundu rakakura zvishoma zvakapetwa huwandu.
Silvia, ndeipi yakasarudzika keke nzira yaunogadzirira ivo vadiki?
Susana, ndinowanzovaitira keke reorenji uye vanochida.
Sandra Iglesias akadaro
Mhoroi, makadii? Ndinoda kukubvunzai kuti hupfu hwakajairika here kana keke repanji
Pindura kuna sandra iglesias
Ini ndinowanzo shandisa hupfu hwegorosi hwakajairwa.
Mhoro wakanaka !!! Ini ndakanamatira kubhugi rako zuva rese, zvakanaka !!! Ini ndaida kuziva kana muto unofanirwa kuve wakasununguka ????. Thanks
Hongu Cris, ndakazviita zvakasikwa, kunyange ndichifungidzira kuti ichazobuda pamwe neakatengwa.
Ndakazviita nemugovera uye hapana kana mafufu akasara. Asi yakanga iri diki. Kuita kuti ikure ndinogona kupeta zvakapetwa uye ndizvozvo, handizvo?
Maita basa vasikana !!
Kana Silvia, huwandu hwaizowedzerwa, kunyangwe iwe ungatofanira kumupa imwe nguva yakati wandei muchoto.
Ndakazviita nemadonhwe echokoreti nekuti ndinonyatsoda musiyano weorenji nechokoreti uye wabuda murufu !!!!!! Zviedze !!!!
Ndokumbirawo kuti ini ndoda iyo yekubheka yeKisimusi danda ndinoifarira zvakanyanya Ndatenda nekuve neiyo pfungwa
Elsa, pese paunoda recipe, ona kana iri muindekisi kana kuinyora pablog iri muresipi yekutsvaga injini.
Pano ndinokusiira iwe. http://www.thermorecetas.com/2010/12/24/receta-postres-thermomix-tronco-nevado-de-navidad/
Mhoroi, mubvunzo, ndinofanira kuzviitira kune vangangoita vana makumi matatu, ndoshandisa zviyeroi? Ini handimboshandisa thermomix uye ini handisi mubiki mudiki, asi kumuzukuru wangu ndinoenda kukicheni kuti ndiite chero zvazvinotora.
Pindura kuna eva
Ini ndinofunga kuti kune vana makumi matatu uchafanirwa kugadzira mabhisikiti matatu kana mabhisikiti mana nemari idzi. Iyo thermomix haina huwandu hwakawanda kudaro 😉
Akachena Fernandez akadaro
Mhoro Silvia, zvinonaka sei uye zvisina mazai, ini ndichazviedza. Iwe une nzira yekubheka keke isina mbiriso here? . Kutenda kwaziso.
Pindura Inmaculada Fernández
Mhoroi vasikana, ndiri kugadzira mabikirwo, ndinovimba ndichaiwana nemazvo
Hi Paqui, zvaive sei?
Keke rinotaridzika kunge rakanakisa, iwe waripa rakakodzera kubata saka ndiri kuenda kukicheni nekukurumidza, ndiri kuzozviita.
Ndinokuudza, nezuro ndakagadzira keke iri ka2, kekutanga kuona kuti harina kutendeuka mukati, ndakaripa yakawanda nguva uye rakazoguma richigwesha zvishoma, asi rakanga risati rapera mukati. Ndakazviita zvakare ndisina kuvhura hovhoni zvachose uye mushure me45 min. Izvo zvaive zvirinani, asi zvichiri zvishoma mbishi mukati. Chero kurudziro? Ndatenda
Pepe, iovhenji ye fan? Inogona zvakare kuda imwe tembiricha yakati wandei, woiisa pakadhi kadiki kuti ikurumidze pamusoro, inogona kunge ichibva muchoto.
Ndanga ndiine hovhoni yangu nyowani kwemakore maviri, ine fan uye ini handina kuishandisa, ndakaedza uye handiwane poindi. Uye pasina fan, ini handizive zvinoitika kwandiri izvozvi, kuti zvinoitika kwandiri senge iwe, vanondisvira asi havapedze kugadzira mukati.
Zvakare imwe hunyengeri yandinoshandisa ndeiyi inotevera, kana yakatogadzirwa nechekunze uye mukati mukati, ndiko kuti, ndinokanganisa asi haina kubuda yakachena, asi zvakare isina kushatiswa. zvandinoita kudzima ovhoni, kuvhura zvishoma uye rega ipedze kubika muhovhoni nekupisa kwayabata, asi zvine hungwaru kuti isatsva nekunze.
Ok, ndichaedza, ovhoni ine fan asi ini handinyatsoishandisa. Ndichairavira ndokuisa cake pasi.
Mhoro ini ndinoda ino blog ini ndatoita mabikirwo mashoma… ndinoda kuziva mamwe mabikirwo emakeke kana makeke asina mazai maita henyu muchsssss
Mhoro Raquel, pano ndinokusiira iyi link yekeke rechipanji isina mazai. Ndinovimba unoifarira: http://www.misdeseosmasdulces.com/2011/09/bizcocho-de-chocolate-sin-huevo-ni.html
Mhoro. Ndichangotenga iyo thermomix.Mwanasikana wangu haatarisirwe nemazai uye haakwanise kushandisa gorosi zvisizvo. Pasina kuve celiac, nekuti zai ndakawana chinotsiva orgran chinoshanda chaizvo, asi ndinoda kuziva hupfu hwandingashandise hungafambe zvakanaka nemabikirwo anga asiri gorosi, ndatenda. Kwandiri zvakakosha zvikuru
Mimwe yemabheka edu inogona kugadzirwa nehumwe hupfu husiri gorosi. Nhasi zviri nyore kuzviwana (chibage, chickpea, oatmeal ...). Unogona kuita zvimwe zvacho neThermomix yako. Asi kugona kushandisa imwe kana imwe kunobva pane imwe nzira yekubheka ... usanonoka kutibvunza kana iwe uchida kugadzirisa imwe yakatarwa.
Vhotera isu muBitácoras Awards. isu tinoda vhoti yako yeakanakisa Gastronomic Blog:
Ndinokutendai nekuparadzira mapapiro anogona kubatsira vanorwara, ini ndiri muparidzi we thermomix uye zvese zvinogona kukubatsira ndinozvida, ndatenda pamberi
Pindura kuna mameba
Kubva kuThermorecetas isu tinogara tichitsvaga mabikirwo anogutsa mapoka ese uye isu tinoedza kubatsira avo vane allergies kana kusashivirira nekuti tinoziva kuti zvinonetsa kubika mumamiriro akadaro.
Ndinogona here kuwedzera yogati ???
Mhoro Lucia, iwe unogona kunyatso kuwedzera iyo yogati. Kutenda nekutinyorera 😉
Mhoroi, ndinoda iyo blog.
Iyo yakanaka sei keke rinotaridzika. Ini ndinofanira kugadzira imwe yezuva rekuzvarwa uye pane zvinopesana nezai uye gluten, saka ini ndaida kushandisa chibage, ndinofanira kutora chiyero chakafanana here? Ndinogona here kuwedzera mbiriso? Ndatenda
Monkfish ine mussels mune yakasanganiswa tomato muto